Xaaladdeyda - Settled
Sida hay’ad samafal, Deggan waxay la shaqeysaa muwaadiniyiinta EU, EEA iyo Iswiss ee qatar ku jira, kana caawiso siday u heli lahaayeen sharcigooda socdaalka ee UK.
Talooyinka guud fadlan fiiri bogga codsashada Xaaladda Deggan.
Deggan waxay kuu diyaarisay bogag talooyin, ku haboon xaaladahaaga.
Qorshaha Dejinta EU waxay qusaysaa muwaadiniyiinta EU oo dhan, hadday tahay intay UK joogeen ama hadday guursadeen Muwaadin Ingriisa ama aysan guursan. Haddaad timid ka hor Disembar 1988, waxay u badan tahay inaad haysatid Joogidda [...]
Anigu waxaan ahay naafo
Haddii aad gaartay boggan, waxaan qiyaasaynaa inaad awood u leedahay inaad isticmaali kartid macluumaadka kombiyuutarka ama talefoonka casriga ama waxaa kaa caawiyey qof ehel ama daryeele ah. Haddii ay sidaas tahay, ma jiro wax carqalad [...]
Anigu waxaan ahay Roma
Haddii aad tahay Roma ama Romani, waad codsan kartaa Xaaladda Deggan haddii aad haysatid dhalashada mid ka mid ah waddamada EU. Haddaad haysatid telefoonka casriga ee Android iyo baasaboor ama kaar aqoonsi, waxaad fiirin kartaa [...]
Waxaan ka imid meel ka baxsan EU
Hadaad ka timid meel ka baxsan EU, waxaa laga yaabaa inaad codsato hadaad: aad tahay xubin ka mid ah qoyska muwaadin EU, EEA ama muwaadin Iswiss ah; aad tahay xubin ka mid ah qoyska muwaadin [...]
Waxaan ahay ilmo ama qof weyn oo ka tegey daryeel
Hadaad daryeel kasoo tagtay, Dawladda Maxalliga ee daryeelka ku siinaysa baa laga yaabaa inay weli mas’uuliyadeeda tahay codsigaaga, ayadoo da’daada ay ku xiran tahay. Ayagay mas’uuliyaddeeda tahay inay aqoonsadaan caruurta xaqa u leh, ayagooy ku [...]
Waxaan ahay guri laawe ama qof aan cinwaan go'an lahayn
naad tahay guri la’aawe ama qof aan cinwaan go’an haysan kaama celinayso inaad dalbato Xaaladda Deggan, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhib kugu noqoto inaad keento qaar ka mida macluumaadka Xafiiska Arrimaha Gudaha ku weydiinayo. [...]
Shaqadaydu waa mid aan xasiloonayn ama aan la hubin
Gudaha UK, ku dhawaad sagaalkiiba hal shaqaale ayaa ku jira shaqo aan xasiloonayn. Tan waxaa ka mid ah iskaa-u-shaqeyste mushaharkiisu hooseeyo, shaqo qandaraaskeedu yahay saacado-eber ah (zero-hour contract) ama shaqo hay’ad. Kuwo badan ayaa ka [...]
Waxaan ahay dhibbane ama ka badbaade xadgudubka guriga
Xaaladdaada qofeed baa laga yaabaa inay kugu adkayso inaad codsato Xaaladda Deggan, ama aad keentid caddeynta deggenaanshaha iyo aqoonsiga lagaa rabo. Waxaa laga yaabaa oo kale inaad welwel ka haysatid nabadgelyadaada iyo nabadgelyada dad kale, [...]
Waxaan ahay dhibbane ama ka badbaade addoonsiga casriga ah
Haddii aadan heli karin baasaboorkaaga ama kaarkaaga aqoonsiga, ayna sabab u noqon qarto inuu qof kale uu haysto, uusanna ku siin doonin. Waxaa laga yaabaa inaad aad uga baqdo inaad weydiiso, ama xitaa aadan ogayn [...]